Yu-Gi-Oh! Duel Links ikozvino yave kuwanikwa muUnited States neCanada | IPhone nhau
Yu-Gi-Oh! yakaratidza hudiki hwedu neakakurumbira kadhi mutambo. Uye yaive yakapusa uye inokurumidza nzira yekuva nenguva yakanaka uye kukwikwidzana neshamwari dzedu. Ichi chinoshamisa chakaramba chakasimba zvakanyanya nekufamba kwenguva, hongu, mune dzimwe nzvimbo kupfuura vamwe. Nekudaro, izvo zvatakatishamisa nezvazvo ndezvekuti ivo havana kusunungura iyo Yu-Gi-Oh! kune mobile technology, chimwe chinhu chingaite kuti chiwedzere kukura kwayo. Zvakanaka mushure mePokémon Go, kunouya iyo Yu-Gi-Oh! Duel Links, mumwe wemitambo kubva paudiki hwedu iyo inodzoka kutiitise isu kuve nenguva yakanaka.
Chinhu chekutanga chinotibata nezve Yu-Gi-Oh! Duel Links ndiyo pfungwa yayo inotyisa, inotaura zvakanaka mu-App kutenga uye mutengo wemutambo, chinhu chete chaunogona kutenga mapakeji emakadhi. Saka sezvawakanzwa, ndiwo makadhi aunotamba uye mashandisiro aunoashandisa ayo anoita kuti iwe ufambire mberi uye kubvisa vanopikisa vako. Sezvo zvaizoitika muhupenyu chaihwo, saka tinonzwisisa kuti Konami anga achida kuendesa iwo manzwiro akananga kuchiratidziro cheyedu mbozhanhare, saka isu takatarisana nedanho rehunyanzvi mumutambo, uye kwete pamberi pekubuda pachena sezvazvinofanira kuva tarisira.
Kubva pano ndinofanira kukorokotedza Konami. Tinoda kuzivisa kuti mutambo wevhidhiyo uripo chete muUnited States neCanada uye kuti kuwedzera muEurope kuchakurumidza kutanga. Sekuwedzera, iwe unozokwanisa kupedzisa mamishini aunowana nawo «mibayiro»Yeavo vakawanikwa nemari chaiyo.
Pakupedzisira, iwe unogona zvakare kubata vese vatambi uye protagonists eakateedzana. Mutambo uyu unosanganisira kuburitswa zviri pamutemo kwechiteedzero kwekuwedzera kubata kwechokwadi. Iri basa rinonakidza kubva kuKonami, zvinoramba zvichionekwa kana zvichizofarirwa kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Yu-Gi-Oh! Duel Links ikozvino yave kuwanikwa muUnited States neCanada
Wowo zvakatora nguvai kuvhura uyu wakanaka mutambo wemafoni edu nhare uye zvakatonyanya nekushaikwa kwemutambo kungave kwepc kana yezvinyaradzo izvo zvakakosha. Nhau huru
mushure mePokémon Go, kunouya iyo Yu-Gi-Oh! Duel Links, imwe yeGAMES yehucheche hwedu iyo inodzoka kutiitise isu kuve nenguva yakanaka.
Chaizvoizvo kunotova nemutambo kubvira 2014 iyo Yu-Gi-Oh! Duel Generation, unogona kutaura kuti ichi chikamu chechipiri
Pindura kuna nairik
Google Mepu inovandudzwa uye iyo yekushandura interface inoshanduka